Asawidespread huma - 英語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: asawidespread human rights violator (英語 - ビルマ語)
Rickshaw asamean of transportation pulled byahuman being has been consideredaviolation of human rights.
လူ​က​ဆွဲ​ပြီး​သွား​ရ​တဲ့ ဒီ​လန်​ချား​ကို ခရီးသွား​လာ​ဖို့​အတွက်​သုံး​တာ​ကို လူ့​အခွင့်​အရေး​ချိုး​ဖောက်​တာ​ဆို​ပြီး ယူဆ​ခဲ့​ကြ​ပါ​တယ်။
Vietnam: Human Rights Lawyer Attacked · Global Voices
ဗီယက်နမ်၊ လူ​အခွင့်အရေး​ရှေ့နေ တိုက်​ခိုက်ခံရ
It's about acquiring basic human rights in their own homeland.
ဒါဟာ သူတို့ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေး ရဖို့အတွက် သူတို့ကိုယ်ပိုင် အမိမြေမှာ ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားနေကြတာပါပဲ။
Asadriving force in evolution, recombination is widespread among beta-CoVs.
ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတွင် တွန်းအားတစ်ရပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေါင်းစပ်မှုသည် beta-CoVs များကြားတွင် ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပါသည်။
အီးဗင့်စ်ကို ကြိုတင်ကြည့်ပုံစံ ဖွင့်ပါ
ဖိုင်ကို တင်ပြချက်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ပါ
_O ဖိုင်တွဲအလိုက် ကြည့်ရန်
Le Quoc Quan,ahuman rights lawyer based in Hanoi, Vietnam, was beaten byagroup of armed men.
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့မှာ နေထိုင်တဲ့ လူအခွင့်အရေးရှေ့နေ လယ်ကွပ်(က်)ကွမ်း(န်)ကို လက်နက်ကိုင်လူတစ်စုက ရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။
လွတ်လပ်ခြင်းနှင့် မေတ္တာ"ဟူသော စာအုပ်ကိုရေးသားသူ မူဆလင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် အိရှတ်(ဒ်) မန်ဂျီက ပါကစ္စတန် ဘုရားသခင်စော်ကားမှုဥပဒေအား အပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်သည်။
Save project asaplain text list
Glycerol is added asahumectant.
အစိုဓာတ်ထိန်းပစ္စည်းအဖြစ် ဂလစ်ဆရင်းကို ထည့်ထားသည်။
The Thai Lawyers for Human Rights Group pointed out that the drafting process of the constitution was not legitimate.
လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အတွက် ထိုင်းရှေ့နေများ (Thai Lawyers for Human Rights Group) သည် အခြေခံဥပဒေကို မူကြမ်းရေးဆွဲသည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် တရားဝင်မဟုတ်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။
We used this image asametaphor.
ဒီပုံကို ကျွန်မတို့က ဥပစာအနေနဲ့ ယူလိုက်ပါတယ်။
- Resist all forms of curtailment of human rights and pursue justice for the victims and their kin.
- လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အသွင်မျိုးစုံကို တားဆီးနိုင်ရေးနှင့် ဓားစာခံများနှင့် ၄င်းတို့မိသားစုများတို့အတွက် အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရန်
Save project asaBrasero audio project
Jay Cuesta asks Facebook friends to remove their profile photos to support the campaign for justice and human rights:
စစ်အာဏာသိမ်းချိန်မှ ယနေ့အချိန်ထိ တရားမျှတမှုကို တစိုက်မတ်⁠မတ်ရှာဖွေနေကြသော ပျောက်ဆုံးသူများ၏ မိတ်ဆွေများ၊
Click to remove this status asafavorite
humanity means (ヒンズー語>英語)multa suspicata (ラテン語>ドイツ語)haute pression (フランス語>スペイン語)fever pale (デンマーク語>ドイツ語)dygtig (デンマーク語>ルーマニア語)spolupracujících (チェコ語>ポーランド語)yang sakitnya hati ku ini karena kau (インドネシア語>オランダ語)ja (スロベニア語>ブルガリア語)hedonistic meaning (英語>タガログ語)maana ya deep sea plain (英語>スワヒリ語)¹àç (韓国語>英語)untergegangen (ドイツ語>タガログ語)adrenérgicos (ポルトガル語>英語)desestacionalització (カタロニア語>スペイン語)et ita porro (ラテン語>イタリア語)standardlänge (ドイツ語>イタリア語)biyai ko? (セブアノ語>タガログ語)manifiesta el acreedor que por el otorgamiento (スペイン語>英語)deeltijdse werkhervatting (オランダ語>フランス語)bahut jyada files (ヒンズー語>英語)today hope you haveagreat day (英語>簡体字中国語)الضربات (アラビア語>エスペラント語)one of my favourite actress nora fatehi (英語>ヒンズー語)tu ne penses pas à théo et sophie? (フランス語>英語)barr root (英語>アラビア語)